WHO oo ku dhawaaqday in xanuunka Corona Virus-ka uu ku si faafaya koonfurta Amerika – Radio Daljir
Maajo 23, 2020 8:30 b 0
Tirada xaaladaha la xaqiijiyay ee cudurka Corona Virus ee adduunka ayaa kor u dhaafay 5.3 milyan, xilli Ururka Caafimaadka Adduunka uu ku dhawaaqay in maalmahii danbe cudurkan uu si xowli ah ugu faafayay Koonfurta Ameerika, iyada oo laga tixraacayo xaaladda halista ah ee ka jira dalka Brazil.
Michael Ryan oo ah sarkaalka gurmadka deg degga ah u qaabilsan WHO, ayaa ka sheegay shir ka dhacay magaalada Geneva in koonfurta Amerika ay noqotay meel ugub ah oo cudurkan uu ku beermay dhawaan.
“Waxaan aragnaa tirada dadka uu soo ritay xanuunkan in ay ku sii faafayaan dalal badan oo dhaca Koonfurta qaarada Ameerika, waxaan walaaca aan qabno ka mid ah in xanuunkan uu wada sameeya wadamada Ameerika oo idil, Brazil ayaa sida muuqata ah halka ugu badan ee ay dhibaatadu xanuunkan saameysey.”
Ururka Caafimaadka Adduunku wuxuu cadeeyay in Brazil laga diiwaangeliyay in ka badan 300, 000 oo xaalada cusub ah iyo 19,000 oo dhimasho ah, Tani waxay kaga dhigeysaa Brazil waddanka saddexaad ee uu sida ba’an u sameeyay Covid 19 marka laga tago wadamada Mareykanka iyo Ruushka.
“Inta badan kiisaska waxaa laga diwaan galiyay gobolka São Paulo, laakiin dhimashada ugu badan waxay ka dhacday gobolka Amazon” ayuu yiri markale Michael Ryan.
Sheekh Cabdirashiid iyo Kulanka Masaajidda ee Khatarta Covid19 (daawo)